Afhayeenka Al-Shabaab: "Mujaahidiinta waxaa u suuragashay iney la wareegaan saldhigii maamulka ashahaado la dirirku ku lahaayeen degaanka Suggure.."
Sheekh C/casiis Abuu Muscab Afhayeenka dhinaca howlgalada ee xoogaga Al-Shabaab ayaa ka hadlay dagaalo habeen hore ciidankooda ku sugan buuraha Golis iyo kuwa Puntland ku dhexmaray degaanka Suggure oo ku yaala meel qiyaastii 50km dhinaca K/galbeed kaga soo toosan madaalada dekeda ah ee Boosaaso.
Abuu Muscab ayaa sheegay in dagaalkaas uu ahaa mid ay iyagu qaadeen ayna degaanka Suggure ku laayeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo gaaraya illaa 30 askari, isagoo xusay in dhinacooda ay ka shahiiday afar nin sida uu warka u dhigay.
"Mujaahidiinta waxaa u suuragashay iney la wareegaan saldhigii maamulka ashahaado la dirirku ku lahaayeen degaanka Suggure halkaasi waxay ka soo qaateen qaniimooyin badan, oo isugu jira hub kala duwan" ayuu intaa ku daray Abuu Muscab oo intaa ku daray in dagaalkaas uu bilow u yahay howlgal ay xididada ugu siibayaan maamulka Puntland.
waxa uu sheegay Abuu Muscab in wado ciidamada ku sugnaa degaanka Sugure ay isticmaali jireen ay miino kula kacday gaari ay la socdeen ciidamo gurmad ahaa, isagoo sheegay in Halkaasi khasaare dhimasho oo ilaa 10 askari ka badan uu ka soo gaaray maamulka Puntland.
Dhinaca kale Maamulka Puntland ayaa qirtay in askar 10 ka badan looga laayey dagaalkaasi ayna wadaan qorsheyaal ay weerar kama dambeys ah ugu qaadayaan buuraha Golis si halkaas uga saaraan xoogaga Al-shabaab ee ku dhuumanaya halkaasi.